Iziqhamo zeCitrus zinokunceda ukuthintela isifo sentliziyo esinxulumene nokutya kakhulu, isifo sesibindi, isifo seswekile-Iindaba-Lianyuan Kangbiotech Co., Ltd
I-Sweetener kunye ne-Flavour Solution
Ukukrakra kwe-Orange Extract
Impilo kunye nesondlo
Izinto zokuthambisa kunye neziqholo
Ukunciphisa umzimba kunye neAntidiabetic
Iziqhamo zeCitrus zinokunceda ukuthintela isifo sentliziyo esinxulumene nokutya kakhulu, isifo sesibindi, isifo seswekile
Ixesha: 2020-10-14 Indawo: 112
I-PHILADELPHIA, Aug. 21, 2016 - iiorenji kunye nezinye iziqhamo ze-citrus zikulungele- ziqulathe iivithamini kunye nezinto ezininzi, ezinje ngee-antioxidants, ezinokukunceda uhlale usempilweni. Ngoku iqela labaphandi linika ingxelo yokuba ezi ziqhamo ziyanceda ekuthinteleni iziphumo eziyingozi zokutyeba kakhulu kwiimpuku ezondla ngohlobo lwaseNtshona, ukutya okunamafutha aphezulu.
Abaphandi bonisa umsebenzi wabo namhlanje kwi-252nd Intlanganiso kaZwelonke kunye nokuBonakaliswa kweAmerican Chemical Society (ACS). I-ACS, elona lizwe likhulu lezenzululwazi, libambe intlanganiso apha ngoLwesine. Inika ngaphezu kwe-9,000 yeentetho kuluhlu olubanzi lwezihloko zesayensi.
"Iziphumo zethu zibonisa ukuba kwixesha elizayo singasebenzisa i-citrus flavanones, iklasi ye-antioxidants, ukuthintela okanye ukulibazisa izifo ezingapheliyo ezibangelwa kukutyeba ebantwini," utshilo uPaula S. Ferreira, umfundi ophumelele isidanga kwiqela lophando.
Ngaphezulu kwesinye kwisithathu sabo bonke abantu abadala e-US batyebe kakhulu, ngokutsho kwamaZiko aseMelika oLawulo lweNtsholongwane kunye noThintelo. Ukutyeba kakhulu kwandisa umngcipheko wokuba nesifo sentliziyo, isifo sesibindi kunye neswekile, ikakhulu ngenxa yoxinzelelo lwe-oxidative kunye nokudumba, utshilo uFerreira. Xa abantu besitya ukutya okunamafutha aphezulu, baqokelela amanqatha emizimbeni yabo. Iiseli ezinamafutha zivelisa iintlobo zeoksijini ezisebenzayo, ezinokonakalisa iiseli kwinkqubo ebizwa ngokuba luxinzelelo lwe-oxidative. Umzimba uhlala ulwa neemolekyuli ngee-antioxidants. Kodwa abaguli abatyebe kakhulu baneeseli ezinamafutha ezandisiweyo, ezinokuthi zikhokelele kumanqanaba aphezulu aphezulu eentlobo zeoksijini ezisebenzayo ezigqitha amandla omzimba okuzikhusela.
Iziqhamo zeCitrus ziqulathe izixa ezikhulu ze antioxidants, iklasi yazo ibizwa ngokuba zi flavanones. Izifundo zangaphambili zidibanise i-citrus flavanones ukunciphisa uxinzelelo lwe-oxidative kwi-vitro nakwiimodeli zezilwanyana. Aba baphandi bafuna ukujonga iziphumo ze-citrus flavanones okokuqala kwiimpuku ngaphandle kokulungiswa kwemfuza kwaye batyiswa ukutya okunamafutha aphezulu.
Iqela, eUniversidade Estadual Paulista (UNESP) eBrazil, lenze uvavanyo ngeempuku ezingama-50, zibanyanga ngeeflavanones ezifumaneka kwiiorenji, iilamuni kunye neelamuni. Iiflavanones abagxile kuzo yayiyi-hesperidin, i-eriocitrin kunye ne-eriodictyol. Kwinyanga enye, abaphandi banika amaqela ukutya okuqhelekileyo, ukutya okunamafutha aphezulu, ukutya okunamafutha aphezulu kunye ne-hesperidin, ukutya okunamafutha aphezulu kunye ne-eriocitrin okanye ukutya okunamafutha aphezulu kunye ne-eriodictyol.
Ukutya okunamafutha aphezulu ngaphandle kweeflavanones kunyuse amanqanaba okuphawula ukonakaliswa kweseli okubizwa ngokuba zii-thiobarbituric acid izinto ezisebenzayo (i-TBARS) ngeepesenti ezingama-80 egazini kunye neepesenti ezingama-57 esibindini xa kuthelekiswa neempuku kwisidlo esiqhelekileyo. Kodwa i-hesperidin, i-eriocitrin kunye ne-eriodictyol zinciphise amanqanaba e-TBARS esibindini ngepesenti ye-50, iipesenti ezingama-57 kunye neepesenti ezingama-64, ngokwahlukeneyo, xa kuthelekiswa neempuku ezondla ukutya okunamafutha aphezulu kodwa zinganikwanga i-flavanones. I-Eriocitrin kunye ne-eriodictyol ikwanciphisile amanqanaba e-TBARS egazini ngeepesenti ezingama-48 kunye neepesenti ezingama-47, ngokwahlukeneyo, kwezi mpuku. Ukongeza, iimpuku eziphathwe nge-hesperidin kunye ne-eriodictyol zinciphise ukuqokelelana kwamafutha kunye nomonakalo esibindini.
UThais B. Cesar, Ph.D., okhokela iqela uthi: "Izifundo zethu azibonisanga kuncipha emzimbeni ngenxa ye-citrus flavanones." "Nangona kunjalo, ngaphandle kokunceda iimpuku ukuba zinciphise umzimba, zibenze baba sempilweni ngoxinzelelo lwe-oxidative olusezantsi, ukonakala kwesibindi, i-lipids yegazi esezantsi kunye neglucose esezantsi."
UFerreira uyongeza, "Olu phononongo lukwacebisa ukuba ukutya iziqhamo zesitrasi mhlawumbi kunokuba neziphumo ezihle kubantu abangatyebanga, kodwa abatya ukutya okunamafutha, kubabeka emngciphekweni wokuhlaselwa sisifo sentliziyo, ukumelana ne-insulin kunye nokutyeba kakhulu esiswini."
Emva koko, iqela liya kuvavanya indlela efanelekileyo yokuhambisa ezi flavanones, nokuba zisijusi se-citrus, ngokutya iziqhamo okanye ngokwenza ipilisi ngezi antioxidants. Ukongeza, iqela liceba ukuqhuba izifundo ezibandakanya abantu, utshilo uCesar.
UCesar wamkela inkxaso-mali kwiNkqubo yeNkxaso kuPhuhliso lwezeNzululwazi ye Isikolo seSayensi yezeMithi e-UNESP naseCitrosuco, inkampani yemveliso yejusi yeorenji eMatão, eSao Paulo, eBrazil.
Umbutho iAmerican Chemical Society ngumbutho ongajonganga kwenza nzuzo osekwe yi-US Congress. Ngamalungu aphantse abe li-157,000, i-ACS lelona lizwe likhulu kwezenzululwazi kunye nenkokheli yehlabathi ekunikezeleni ukufikelela kuphando olunxulumene nekhemistri kwindawo yogcino-zincwadi ezininzi, iijenali ezijongwa ngoontanga kunye neenkomfa zesayensi. Iiofisi zayo eziphambili ziseWashington, DC, naseColumbus, eOhio.
Uphando lwenziwa kwintlanganiso yeAmerican Chemical Society.
U-Lianyuan Kang Biotech Co, Ltd
Inombolo yomnxeba / ifeksi: +86 731 8892 6577/+ 86 731 8551 6968
iwebhusayithi :: www.kangbiotech.com
I-copyright © 2020 uLianyuan Kangbiotech Co., Ltd